Somaliland Oo ka Jawaabtay Hadal kasoo Yeeray Dawladda Somaliya – Heemaal News Network
Somaliland Oo ka Jawaabtay Hadal kasoo Yeeray Dawladda Somaliya
Xilli dhawaan dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ay soo bandhigtay Jaamacadaha ay aqoonsan tahay oo qaarkood ku yaal degaannada Soomaliland ayaa Maanta waxaa markii ugu horeeyay hadalkaas ka jawaabay Somaliland.
Guddiga Tacsliinta Sare ee Soomaliland oo kulan ku yeeshay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ay ku sheegeen in aan waxba ka quseyn warkaasi kasoo baxay Dowaldda Soomaaliya rr lagu so bandhigay liiska Jaamacadaha ay aqoon satay dowladda Soomaaliya.
Guddoomiyaha Guddoomiyaha Saleemaan Dirir Cabdi uddiga Tacsliinta Sare ee Soomaliland ayaa sheegay in Shan Jaamacadood oo ku yaal degaannada Soomaaliland ay dowladda Soomaaliya ku dartay Jaamacadaha ay aqoonsan tahay .
Waxaa uu hadalkiisa u intaasi ku dara in aan waxba kajirin wararka sheegaya in dowladda Soomaaliya ay qiimeyn ku sameeysay Jaamacadaha ku yaal degaannada Soomaliland, waxaana uu sheegay in hadalka dowladda uu la mid yahay hadalkii ahaa in Hawada ay xukunto dowladda Soomaaliya.
Ugu dambeyn Guddoomiyaha ogeeysiiyay in aan waxba kajirin Shanta Jaamacadood ee qiimeynta dowladda Soomaaliya kujiray, isla markaana Soomaliland kaliya ay la xisaabtameyso Jaamacadaha.
Maraykanka Oo Cali Dheere Ku Daray Liiska Argagixsada Caalamiga